Dmenu sy Rofi: mpandefa fampiharana 2 tsara ho an'ny WM | Avy amin'ny Linux
Mitohy amin'ny lohahevitry ny Application Launchers (mpandefa), anio dia hiresaka 2 hafa efa niasa be isika, fa indrindra ao amin'ny Window Managers (WMs), betsaka noho ny amin'ny Tontolo Desktop (DE). Ary ireto 2 ireto dia antsoina hoe: Dmenu sy Rofi.
Tsara ny manamarika fa, araka ny ho hitantsika amin'ireo sary etsy ambany, ireo mpandefa tsipika sy tsotra toy ny Dmenu y Rofi azo ampiasaina amin'ny sasany DES como el XFCE. Ary ny mifamadika amin'izany, izany dia ireo mpandefa sary sy mahery Albert, Kupfer, Ulancher ary Synaps dia afaka manompo amin'ny sasany amin'ireo WMs efa misy, izay fantatro tsara, satria efa nanandrana mpandefa sasany momba izany tamin'ny sasany aho WMs.
Ho an'ireo izay mbola tsy nahita sy / na namaky ny lahatsoratray taloha sy farany momba ny hafa Application Launchers (mpandefa), azonao atao ny miditra amin'izy ireo, aorian'ny famakiana ity publication ity, amin'ny alàlan'ny fanindriana ireto rohy mifandraika ireto:
Ary tadidio fa misy maro hafa, Mpandefa miasa mavitrika sy tsy miasa, toy ny:
TSARA MISY: https://do.cooperateam.net/
1 Mpandefa atolotra ho an'ny WM: Dmenu sy Rofi
Mpandefa atolotra ho an'ny WM: Dmenu sy Rofi
Ity mpandefa hazavana sy mandeha ity dia voalaza ao aminy tranokala ofisialy, toy izao manaraka izao:
"Lisitry ny dinika ho an'ny X, namboarina ho an'ny dwm. Mahomby amin'ny fikirakirana ny laharan'ny menio nofaritan'ny mpampiasa azy".
Toy ny hafa mpandefa launcher ho an'ny WMs, Dmenu koa dia tsotra sy mandeha, tena azo ovaina sy azo ovaina, raha fintinina, misokatra amin'ny fahafaha-manova na mifameno amin'ny fanampiana na an'ny antoko fahatelo na avy, amin'ny alàlan'ny programa, script ary / na tsotra baiko mibaiko manokana rehefa namboarina mba hatomboka ao anatin'ny WMs o DES izay hamonoana azy.
Ao amin'ny fizarana script misy add-on tena ilaina sy mahaliana tokoa dia azo sintonina avy amin'ny tranokalany. Raha ho an'ny fanamboarana mandroso kokoa, ny tsipika kaody sasany nalaina tamin'ny maro fisie fisie (dotfiles) azo jerena amin'ny Internet, avy amin'ireo mpampiasa sy vondrom-piarahamonina mafana fo an'ity mpandefa malaza ity.
Izaho manokana dia tena tiako ny nanambatra azy io tamin'ny Fampiharana Fzf, izay motera fikarohana fuzzy ho an'ny tanjona ankapobeny. Ho an'ny zavatra apetrako matetika Dmenu miaraka amin'i Fzf amin'ny baiko tokana, araka ny aseho etsy ambany:
Nampidiriko izy ireo toy izao, ao amin'ny WM i3 mampiasa ilay rakitra mifanaraka amin'ilay lalana: «.config/i3/config»
Ary mampiasa a fanamboarana ilaina manaraka hita amin'ny Internet:
Farany, tsara ny manamarika fa amin'izao fotoana izao Dmenu mandeha amin'ny kinova 5.0, izay navotsotra tato ho ato (02/09/2020), araka ny voarakitra ao aminy tranokala ofisialy eo amin'ny sehatra Git. Noho izany, azonao atao ny misintona sy mampiasa an'ity kinova farany ity raha te hampiasa ny tombony farany azo avy aminy ianao, raha toa ianao ka tsy te hampiasa Dmenu avy amin'ny trano fitahirizam-bokin'ny Distro anao.
Ity mpandefa tsotra manaraka tsotra nefa marobe ity dia voalaza ao aminy tranokala ofisialy, toy izao manaraka izao:
"Mpanova varavarankely, mpandefa fampiharana ary mpisolo toerana dmenu".
Ary amin'ny ankapobeny, Rofi Nahazo ny fahaizany ankehitriny na ny habetsaky ny fampiasa ao anatiny mora foana, satria izy io dia nanomboka ho toy ny clone of SimpleSwitcher, nosoratan'i Sean Pringle, avy eo lasa Rofi ankehitriny amin'ny alàlan'ny fampidirana repertoire midadasika misy endri-javatra fanampiny, toy ny mpandefa fampiharana sy ny mpandefa ssh, mamela azy hiasa ho toy ny fanoloana ny Menio-Drôma ny sakafo ary / na Dmenu.
Araka izany, Rofi, mitovy aminy Dmenu, azonao atao ny manome ny mpampiasa farany a GNU / Linux Distro, lisitry ny safidy an-tsoratra izay ahafahana misafidy iray na maromaro, na inona na inona baiko baiko amin'ny fampiharana fampiharana, ny fisafidianana varavarankely na safidy nomen'ny script ivelany.
Rofi Mora ny mametraka azy, satria izy dia ao amin'ny ankamaroan'ny toerana fitahirizan'ireo Fizarana GNU / Linux. Ohatra, amin'ny baiko baiko tsotra etsy ambany, napetrako ao MX Linux:
Ny tranonkalanao ofisialy ao amin'ny GitHub, amin'ny teny anglisy, dia feno informatika, izay mahatonga azy ho fitaovana voarakitra an-tsoratra tsara izay tsotra sy haingana ampiasaina. Na izany aza, toy ny amin'ny Dmenu, azonao jerena amin'ny Internet, fanaingoana mahaliana na fanaingoana ny fampiasana sy ny bika hisedrana. Azonao atao ihany koa ny mitsidika ny azo antoka foana Arch Wiki raha te hahalala bebe kokoa momba Rofi.
Ary farany, araka ny hitanao amin'ny sary 2 teo aloha, Dmenu sy Rofi azo ampiharina, ohatra, ao a DE como el XFCE.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" momba ireo mpandefitra fampiharana 2 tena soso-kevitra sy efa malaza antsoina hoe «Dmenu y Rofi», izay matetika ampiasain'ny vondron'olona mpampiasa momba ny azy ireo Window Managers (WMS) fa tsy ny hafa, toy ny Ulauncher, Synaps, Albert ary Kupfer; dia liana sy ilaina lehibe, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Dmenu sy Rofi: Mpandefa app 2 tsara ho an'ny WMs
Mampiasa dMenu-extensions (dMenu feno kokoa) aho.
Etsy ankilany, ny tombony azo avy amin'ny dMenu (ary angamba koa an'ny Rofi), tsy toy ny mpandefa hafa, dia mandany loharano (ary tena kely) rehefa mampiasa azy ianao. Ny sasany kosa mandany harena na dia tsy ampiasainao aza.
Miarahaba anao, Pedruchini. Misaotra anao tamin'ny hevitrao sy ny fandraisanao anjara. Tsy nahalala momba an'i Dmenu Extended aho, ka navelako ho any amin'ireo tranonkala liana ny rohy.
Nanandrana maromaro tamin'ireo aho ary tsy maharesy lahatra ahy ny marina, misy foana ny zavatra tsy mety amiko. Ny hany ampiasako dia tiako sy tsapako fa haingana, mahazo aina ary tsy ato amin'ity lisitra ity dia ny jgmenu, atambatra amin'ny gmrun.
Miarahaba anao, M13. Misaotra anao tamin'ny hevitrao sy ny fandraisanao anjara. Hanadihady momba ilay nolazainao taminay aho.
Manolo-kevitra ny hanafoana sy hanaisotra ny protokolon'ny Fedora SCP izy ireo
LXQt 0.16 dia efa navotsotra ary ireo no fanovana lehibe indrindra